Inhlangano iWHO iphasisa iSinopharm yaseChina ukugomela ukhuvethe - Bayede News
Kuhlaselwe kwabulawa amaphoyisa eNigeria – umbiko
IWorld Health Organization (WHO) isiqinise isithunzi seChina ekwakheni imigomo yokulwa nokhuvethe emveni kokuphasisa iSinopharm ukuthi isitshenziwe ngaphansi kwezimo eziphuthumayo.
ISinopharm, newumgomo wokuqala eyenziwe eChina ukuphasiswa iWHO, ibiyingxenye yamabili iBeijing ebifake isicelo sokuthi aphasiswe yile nhlangano yezempilo engaphansi kweNhlangano Yezizwe.
Iphawula emveni kwesinqumo, iChina ibe isizibophezele ekutheni iqinisekise ukuthi abantu basemazweni asathuthuka bayayithola imigomo yokhuvethe.
Okhulumela uMnyango Wezangaphandle uHua Chunying, uthe bayasamukela isinqumo seWHO sokuphasisa iSinopharm ukuthi isetshenziswe phansi kwezimo eziphuthumayo.
“IChina isanda kumemezela ukuthi izonikela ngemishanguzo eyizigidi ezili-10 zeCOVAX ukuze kuhlangatshezwane nokuhlinzeka amazwe asathuthuka,” kusho uHua.
Isigungu sochwepheshe esihlanganiswe iWHO siphasise iSinopharm emva kokucubungula ucwaningo lwayo ngenyanga edlule.
IStrategic Advisory Group of Expert, SAGE ngamafuphi, ivumele ukuthi iSinopharm isetshenziswe abantu abaneminyaka eli-18 kuya phezulu, nalapho bezogonywa khona ngemijovo emibili nokuthi imijovo ishiyane ngamasonto amathathu kuya kwamane.
ISAGE ithole ukuthi umgomo weSinopharm, okuyinkampani engaphansi kukaHulumeni eChina, inezinga elifinyelela kuma-79% lokusebenza ekuvikeleni ukhuvethe kanye nokuthi indlela yokugcinwa kwawo umgomo ilula.
Nokho leli thimba lochwepheshe liphinde lakubalula ukuthi imininingwane ethinta iqoqo labantu abaneminyaka engama-60 kuya phezulu ayanele, kodwa bengeze ngokuthi asikho isizathu sokubona ukuthi umgomo ungasebenza ngokwehlukile kubantu asebekhulile.
Umgomo wesibili iSinovac wona kulindeleke ukuthi kuphume isinqumo emva kokuhlolwa kwemininingwano yawo yocwaningo ngasekupheleni kwale nyanga. “Sesiqalile ukucubungula umbiko ovela kuSinovac. Besisacele eminye imininingwane kuyona inkampani esethemba ukuthi sizoyithola ngokushesha ukuze senze isinqumo,” kusho u-Arnaud Didierlaurent ongusihlalo wesigungu esicebisa iWHO.
ISinopharm neSinovac imigomo eyingxenye yalawo amane iChina esiwenzile nasesetshenziswa kuleli lizwe kanye nakwamanye lapho enikele ngawo khona.
Ukufakwa komgomo ohlwini lweWHO kukhuthaza amazwe ahlukene ukuthi akhululeke ngokuphepha kwawo. Bangaphezulu kwezigidi ezingama-317 abantu asebegonyelwe ukhuvethe eChina kusukela uhlelo lokuhlinzeka abantu luqalile.
ISinopharm isikhiphe imigomo angaphezulu kwezigidi ezingama-200 nesisetshenziswe eChina kanye nakwamanye amazwe, ngesikhathi iSinovac yona isihlinzeke ngezigidi ezingama-300.
Angaphezulu kwama-70 amazwe asehlinzekwe ngemigomo eyenziwe eChina, kanti kuwo la mazwe kubalwa lawo ase-Afrika, e-Asia kanye naseLatin America, nokuyizifunda ezisasilele emumva ngokuthola imigomo yokhuvethe ngenxa yokuthi iningi lamazwe adla imbuya ngothi.
“Lokhu kwandisa uhla lwemigomo engathengwa yisikhungo seCOVAX, kuphinde kunike amazwe ukuyiphasisa ngokukhululeka le migomo, ayithenge bese eyinikeza abantu,” kuchaza uMqondisi Jikelele weWHO uTedros Adhanom Ghebreyesus.
Kuze kube imanje iWHO isiphasise imigomo yokhuvethe iPfizer-BioNTech, iJohnson & Johnson, iModerna kanye ne-AstraZeneca nesingene ohlelweni lweCOVAX.
ICOVAX isikhungo esithenga imigomo ukuze siwasabalalise emazweni asathuthuka nangakwazi ukuwathola. Nokho lesi sikhungo sibhekene nenkinga yokungabi nawo imigomo eyanele ngenxa yokuthi iningi lamazwe adla izambane likapondo awawola wonke ekuqaleni konyaka, ngokunjalo nezinkampani eziwakhayo zinenkinga yokukhiqiza imigomo edingekayo.
IChina izibophezele ngokuthi izonikela ngemijovo yemigomo eyishumi lezigidi. Inkampani yase-USA iModerna yona kulindeleke ukuthi inikele ngemigomo eyizigidi ezili-10.
Lesi sikhungo seNhlangano Yezizwe siphinde sibe nesivumelwano neModerna sokuthi le nkampani izosidayisela imijovo yeModerna eyizigidi ezingama-500, ezingama-466 kuwona azoze adilivwe ngonyaka ozayo.
IWHO ithe idinga imigomo eyizigidi ezingama-20 ngokushesha kulesi sigamu sesibili sonyaka ukuze ihanjiswe emazweni ase-Afrika lapho sekube khona nokuphazamiseka kokutholakala kwemigomo.
ICOVAX yethemba ukuthi kuzothi kuphela unyaka wezi-2021 izobe isiyitholile imigomo eyisigidigidi esisodwa, kanti isigamu sawo kuzohlinzekwa ngaso amazwe ahlwempu angama-92.
nguZanele Buthelezi May 14, 2021